2 Samoela 4 - Ny Baiboly
2 Samoela toko 4
Ny nahafatesan'Isboseta - Ny niafaran'ny tamingan'i Saola.
1Nony ren'ny zanakalahin'i Saola fa hoe maty Abnera, tao Hebrona, dia niraviravy tànana izy ary kivy ratsy Israely rehetra. 2Roa no lehiben'ny antokon'olon'ny zanakalahin'i Saola, dia Baanà ny anankiray, ary Rekaba ny anankiray, samy zanak'i Remona avy ao Berota amin'ny taranak'i Benjamina. Fa natao isan'i Benjamina koa Berota, 3ary ny Berotia dia nandositra nankany Getaïma, ka mbola monina any mandrak'androany.
4Jonatasy zanak'i Saola, dia nanan-janaka malemy tongo-droa. Dimy taona io zaza io, no tonga avy any Jezraela, ny filazana ny amin'i Saola sy Jonatasy hoe maty, ka nentin'ny mpitaiza azy nandositra izy; noho ny firotorotoan'izy io loatra teny am-pandosirana anefa dia potraka ny zaza ka nalemy tongotra. Mifiboseta no anarany.
5Ary tonga Rekaba sy Baanà zanak'i Remona avy any Berota, ka nony tamin'ilay andro nigaingaina iny indrindra, dia niditra tao an-tranon'Isboseta izay nandrinandry niala sasatra tamin'ny misasaka andro. 6Nony niroso hatreo afovoan-trano haka vary izy ireo, dia nasiany tamin'ny kibony izy. Ary Rekaba sy Baanà rahalahiny dia nitsoriaka an-tsokosoko. 7Ilay nandry teo am-parafarany, tao an'efitra fandriany iny Isboseta, no niditra tao an-trano izy ireo, dia novonoiny ho faty izy, ka notapahiny ny lohany, dia nentiny, ary nandeha mandritra ny alina manontolo izy, namaky ny Tany lemaka. 8Nentiny tany amin'i Davida tany Hebrona ny lohan'Isboseta, dia hoy izy tamin'ny mpanjaka: Indro ny lohan'Isboseta zanak'i Saola, fahavalonao, izay nitady ny ainao. Namalian'ny Tompo faty an'i Saola sy ny taranany androany ny mpanjaka tompoko. 9Ary hoy ny navalin'i Davida tamin'i Rekaba sy Baanà rahalahiny, zana-dRemona, avy any Berota: Velona Iaveh, izay nanafaka ahy tamin'ny loza rehetra! 10Ny olona tonga tao amiko hilaza ny vaovao hoe indro fa maty Saola, ary nihevitra fa nitondra zava-baovao tsara, nefa nasaiko nosamborina sy novonoina ho faty tany Sikelega ho valin'ny vaovao tsara nentiny, 11ka mainka raha olona ratsy fanahy no namono olona tsy manan-tsiny, any an-tranony, eo am-pandriany, tsy maintsy hitaky eo amin'ny tànanareo ny rany aho sy hamongotra anareo amin'ny tany! 12Dia nandidy ny zatovo hamono azy ireo Davida; ary notapahin'izy ireo ny tongony aman-tànany, ka nahantony teo amoron'ny farihy any Hebrona. Rahefa izany dia nalainy ny lohan'Isboseta sy naleviny tao amin'ny fasan'i Abnera ao Hebrona. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0639 seconds